National Power News:: गायक शिव परियारको माया विक्ने भएछ गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा नं १. मा (भिडियो सहित) National Power News:: गायक शिव परियारको माया विक्ने भएछ गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा नं १. मा (भिडियो सहित)
Friday, October 1, 2021 National Power
काठमाण्डौ – भर्खरै मात्र शिव परियारले गाएको गीत ‘माया बिक्ने भएछ’ निकै चर्चामा छ । उक्त गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा समेत १ नं. रहन सफल भएको छ । संगीत तर्फबाट गीत १ नं. ट्रेण्डिङमा परेको हो । गीतको भिडियोलाई १२ लाख ५६ हजार बढी दर्शकले हेरिसकेका छन् । उत्कृष्ट गीत भन्ने भावका कमेन्ट अत्याधिक छन् । विशेषतः गायक शिव परियार र कलाकार पुजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको उत्कृष्ट काम भनेर तारिफ गरिएको छ ।
गणेश अधिकारीको शब्द र नबिन कार्कीको संगीत रहेको गीतमा बिशाल निरौलाको एरेन्ज रहेको छ । लोकप्रिय कलाकारद्वय पुजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ अभिनित भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन् । बुद्ध थापाले छायांकन गरेको भिडियोलाई बिकाश धामलाले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोलाई गीतका एरेन्जर बिशाल निरौलाको युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको छ ।